Izindaba - Ama-Tubes e-Florescence Aphethwe Umsebenzi Wonyaka We-Barbecue Wolwandle
Ama-Tubes e-Florescence Aphethwe Umsebenzi Wonyaka We-Barbecue We-Seaside
Amashubhu eFlorescence abambe umsebenzi wokosa inyama yolwandle minyaka yonke ngoMgqibelo. Sasidlala imidlalo ndawonye, ​​sosa inyama, sicule futhi sidanse sishisa umlilo. Abangane abaningi bakwamanye amazwe nabo babamba iqhaza ngokuzenzakalela emidlalweni yethu nakwizinto esizenzayo. Sithanda imikhiqizo yethu nomsebenzi wethu, sithanda isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka, amafu amhlophe, ulwandle, sithanda ozakwethu abasizanayo, sithanda umndeni wethu ofudumele waseFlorescence, sithande kakhulu abangane bethu bakwamanye amazwe nabalingani bethu abavela kude. Lo ngumsebenzi omuhle futhi sikubheke ngabomvu ukuthi usijoyine ngonyaka ozayo!
Amashubhu e-Florescence anethemba lokuba namakhasimende amaningi azovakashela idolobha lethu nenkampani yethu, futhi abe nethuba lokujoyina nathi ukudlala imidlalo, sazi okuningi omunye nomunye futhi sijabule ndawonye, ​​sinethemba lokugcina ibhizinisi lesikhathi eside omunye nomunye. Okwamanje sizokwakha amathuba amaningi okuya edolobheni nakumakhasimende kwezokuxhumana futhi sazi okuningi abakudingayo, ukwenza ngcono futhi sandise umugqa womkhiqizo wethu kanye nekhwalithi yemikhiqizo yethu kanye nensizakalo. Ukubheka phambili ikusasa elisha eliqhakazile namakhasimende ndawonye.
Qingdao I-Florescence I-Co, ltd ingumkhiqizi weshubhu elingaphakathi elinolwazi lomkhiqizo olungaphezu kweminyaka engama-26. Umkhiqizo wethu ikakhulukazi kufaka amashubhu wangaphakathi enjoloba wezimoto, amashubhu obunjiniyela kanye ne-raber flap njll. Inkampani yethu inabasebenzi abangama-300 (kufaka phakathi onjiniyela abaphezulu aba-5, abasebenza okungu-40 abaphakathi naphezulu nabasebenzi abangochwepheshe nabezobuchwepheshe) .Inkampani ibhizinisi elikhulu elisebenza kabanzi ucwaningo nentuthuko, ukwenziwa, ukuthengiswa kanye nensizakalo. Imikhiqizo yethu ihanjiswa emazweni angaphezu kwama-20 emhlabeni wonke, kuthandwa ngamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, sidlule i-ISO9001: Ukuvunyelwa kuka-2008 futhi sinohlelo lokuphatha lwesimanje nolwesayensi olunikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezibhekelekayo. Sibheke phambili ekwakheni ubudlelwane bebhizinisi obuzuzisa isikhathi eside namakhasimende ethu.